Makore mashanu mujeri reGerman nekuda kwekunyepedzera COVID-19 zvitupa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Germany Kuputsa Nhau » Makore mashanu mujeri reGerman nekuda kwekunyepedzera COVID-19 zvitupa
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Shopping • Technology • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Makore mashanu mujeri reGerman nekuda kwekunyepedzera COVID-19 zvitupa.
Kugadzira nekutengesa zvitupa zvemanyepo eCCIDID-19 kwave kuwedzera indasitiri yemusika muGermany.
Nhamba dzeCCIDID-19 muBerlin dzakakwira zvakanyanya nemusi weChina wapfuura, paine mazana maviri nemakumi masere ane makumi masere nemana emhosva dzakataurwa zuva iroro.
Paramende yeGermany ichafunga nezvemitemo mitsva ye-anti-COVID-19 nemusi weChina.
Kutanga Muvhuro, kuve neCCIDID-19 yekudzivirira kana chitupa chekudzoreredza kunofanirwa kupinda mumaresitorendi, mabhaisikopo, mabhaisikopo, mamuseum, magaraji, madziva ekushambira, nzvimbo dzekutandarira, pamwe nevagadziri vebvudzi uye salon dzekunaka muBerlin.
Iyo Bundestag (Paramende yeGerman) inotarwa kusarudza pamusoro pemitemo mitsva yekurwisa-COVID-19 mangwana, kunyangwe dhizaini yakatoburitswa kune vezvenhau.
Sezvo hurumende yemubatanidzwa yeGermany ingangove iri kutsvaga kusimbaradza zvibodzwa padenda, vanhu vanogadzira uye vachishandisa vachiziva. zvitupa zvekudzivirira zvemanyepo zveCOVID-19 anogona kutarisana nemakore mashanu ari mujeri.
Fake COVID-19 bvunzo mhedzisiro uye coronavirus kudzoreredza zvitupa zvichawira pasi pechikamu chimwe chete chemhosva, nezvirango zvakafanana kune vanonyepedzera nevaridzi.
Zvese zvinotarisirwa mumitemo mitsva yakanyorwa neSocial Democrats, pamwe neFree Democratic neGreen Parties. Mapato matatu aya ari munhaurirano dzemubatanidzwa uye ari kutarisirwa kuumba hurumende itsva yeGermany kutanga kwesvondo rinouya.
Kugadzira nekutengesa zvitupa zvemanyepo eCCIDID-19 kwave kuwedzera indasitiri yemusika muGermany. Mune imwe chete nyaya yakadai yakashumwa neDer Spiegel mukupera kwaGumiguru, mutengesi wemanyepo aishanda muchitoro chemishonga muMunich nemumwe wake vakaburitsa mazana mashanu. zvitupa zvemanyepo zvedhijitari mukati memwedzi mumwe chete, kuita € 350 kune imwe neimwe yakatengeswa.
Zvichakadaro, Berlin zviremera zveguta zviri kuronga kuwedzera zvirambidzo muguta guru reGerman, uko, kutanga Muvhuro, kuve nejekiseni rekudzivirira kana kudzoreredza kunofanirwa kupinda mumaresitorendi, mabhaisikopo, mabhaisikopo, mamuseum, magaraji, madziva ekushambira, nzvimbo dzekurovedza muviri, pamwe nevagadziri vevhudzi. uye ma salons.
Musi weChipiri, Berlin Meya Michael Müller akasimbisa kuti zviremera zveguta zvinoda "kuva nechimwe chishandiso" kuendesa kupararira kweCOVID-19.
Nekudaro, meya akaramba kutsanangura kuti matanho matsva achave api.
Vezvenhau vemunharaunda vanofungidzira kuti kutanga svondo rinouya, pamusoro pechinodikanwa chekuva nejekiseni rekudzivirira kana kupora kuti vapinde munzvimbo dzeveruzhinji, vanhu vari mukati menzvimbo vanozodawo kudzidzira kushamwaridzana uye kupfeka mask, kana kuve nemhedzisiro yekuyedzwa.
Yese mitsva mirairo yeguta uye zvirambidzo zvinouya mushure meCOVID-19 nhamba mukati Berlin yakarova zvakanyanya nemusi weChina wapfuura, paine 2,874 nyowani dzehutachiona hwekoronavirus dzakataurwa zuva iro.
November 18, 2021 pa 04: 56
Kugadzira uye kutengeswa kwezvitupa zvekunyepa zveCCIDID-19 kwave kuwedzera indasitiri yemusika muGermany. Mapurisa ekuGermany akaumba boka rakakosha kurwisa musika mutema uri kukura mune zvitupa zvevaccine zvekunyepa. Izvi zvinoenderana neEuropol, sangano remapurisa reEuropean Union.